हामीलाई कुनै पनि हिसाबले असफल हुने छुट छैनः घनश्याम भुसाल - हिमाल दैनिक
हामीलाई कुनै पनि हिसाबले असफल हुने छुट छैनः घनश्याम भुसाल
पाँच लाख हाम्रा सन्तानहरुलाई वयस्क बनाउँछौँ, चार लाखलाई बाहिर पठाउँछौँ। एक लाख प्लेनको टिकट नपाएर वा के भएर यहाँ बस्छन्
३० बैशाख २०७६, सोमबार १६:३३
म यहाँ यो विनियोजन विधेयक ०७६ माथि छलफल गर्न र यसलाई समर्थन गर्न, समर्थन गर्न यस अर्थमा कि अहिलेको समयका समस्याहरु र यसको समाधानका लागि यसमा उल्लेखित छन् भन्ने मलाई लाग्दछ।
कति शब्दमा छन् त कति अर्थमा छन्, कति व्यक्त छन् त कति अव्यक्त छन् तर, छन्।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ र यसको आधार जुनसुकै राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनको आधार त्यसको आर्थिक जीवन हो। त्यो कति राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले हाम्रा बजेट मार्फत हामी पेश गर्छौँ, त्यो सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दैछौँ।
म यहि विषयमा केहि छलफ गर्न चाहन्छु। र यहाँ उठेका भन्दा अलि फरक तरिकाले केहि कुरालाई जुन यसमा लेखिएका छन्, तिनै कुरालाई अलि फरक तरिकाले बुझ्दछु र व्याख्या गर्न चाहन्छु।
हाम्रो जस्ता मुलुकहरु, हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यी लोकतन्त्रहरुको लामो इतिहास छ र अस्थिरताको पनि असाध्यै लामो इतिहास छर त्यसको जगमा आर्थिक कारणहरु छन्।
खासगरी गएको ७० वर्षको विकासको इतिहास हेर्दा मुलत पश्चिमले पूर्वलाई, उत्तरले दक्षिणलाई बजार बनाउनका लागि विकासको सुरु भएको थियो। र त्यसले आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। बजार गयो, त्यो बजार थेग्ने उत्पादन त्यी मुलुकहरुमा थिएन। त्यी नवस्वाधिन मुलुकहरुमा आफ्नो बजार थेग्ने उत्पादन थिएन। यसले गर्दा सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थहरु, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुले थेग्नु पर्दथ्यो। बजारलाई थेग्ने पूर्वाधारहरु पनि चाहिन्थ्यो र। त्यो आफैँले बनाउनु पर्दथ्यो र त्यो पूर्वाधार थेग्नका लागि उनीहरुले ऋण लिनु पर्दथ्यो। जसको चपेटमा यिनीहरु पर्दै गए।
हामीलाई कुनै पनि हिसाबले असफल हुने छुट छैन
घनश्याम भुसाल:पाँच लाख हाम्रा सन्तानहरुलाई वयस्क बनाउँछौँ, चार लाखलाई बाहिर पठाउँछौँ। एक लाख प्लेनको टिकट नपाएर वा के भएर यहाँ बस्छन्
त्यो सत्ता थाम्नका लाग अब राजनीति र अर्थतन्त्र एकै ठाउँमा मिल्दै गए र त्यसरी दलाल अर्थतन्त्रहरु श्रृजना हुँदै गए। त्यी दलाल अर्थतन्त्रहरुले समस्या समाधान नगरेपछि त्यीनको विरुद्धमा जनता उठे र जति जनता उठ्दै गए त्यति नै दलाल तन्त्रको रक्षाका लागि सत्ताहरु फासिष्ट हुँदै गए। हाम्रा पछिल्ला मुलुकहरुको इतिहास यस्तै हो।
आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ र हिँजो हामी लोकप्रिय र बलियो बहुमतका साथ जनताले जिताएर पठाएका छन्। यसर्थ हामीलाई कुनै पनि हिसाबले असफल हुने छुट छैन भन्ने कुरा केबल नारा मात्र होइन।
आज यो पपुलर जनमत, यो लोकप्रिय जनमत असफल हुँदा यसलाई थाम्ने, यसलाई व्यहोर्ने र त्यो भ्याकुम पूरा गर्ने अर्को शक्ति छैन र अनिवार्य रुपले पपुलिष्ट नामको वा अर्को कुनै दक्षिणपन्थी दिशामा हामी जान्छौँ। त्यो खतरा हाम्रो टाउकोमा पनि मढाराइराखेको छ, जसरी तेस्रो विश्वका गएका ७० वर्षका इतिहासमा त्यी मुलुकहरुमा नाच्यो।
यसर्थ हामी यो सन्दर्भ राखेरै बजेट निर्माण गर्नु पर्छ है भन्ने मलाई लाग्दछ। बजेटको सिद्धान्तको कुरा गर्दा संविधानलाई सिद्धान्त बनाउने हो तर, स्वयं त्यो संविधानको आधार के हो? त्यसले समाजवादको कुरा गर्यो। किन समाजवादको कुरा गर्यो भन्नेतर्फ हाम्रो कम छलफल भएको छ।
तर, एउटा खुशीको कुरा हो कि अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल स्वरुप भनेको दलाल हो भन्ने बारेमा अब करिब करिब एक हिसाबले बौद्धिकहरु र राजनीतिक पार्टीहरुमै एकखालको सहमति भएको छ। त्यस्तो देखिन्छ।
खासगरी हाम्रो व्यापार घाटा किन छ? पैसै नभएर त रहेनछ नि। हामी एक खर्ब बेच्छौँ तर, १२ खर्बको किन्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ हामीसँग पैसा नभएर होइन। त्यो पैसाले गर्नु पर्ने हाम्रो काम गरिराखेको छैन। त्यसले राष्ट्रिय काम गरिराखेको छैन। एकप्रकारले त्यसले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरिराखेको छैन।
पाँच लाख हाम्रा सन्तानहरुलाई वयस्क बनाउँछौँ, चार लाखलाई बाहिर पठाउँछौँ। एक लाख प्लेनको टिकट नपाएर वा के भएर यहाँ बस्छन्। यो कुनैपनि एउटै घटनालाई लिएर अलि ठूलो तथ्यांकलाई लिएर बस्नु भयो भने यो अर्थतन्त्रको जुन हामीले राजाबाट लियौँ या हिँजोको प्रजातान्त्रिक इतिहासबाट लियौँ, यो बरदान हामीले लिएका छौँ। यो दलाल अर्थतन्त्र हामीले उत्तरदानमा पाएका छौँ।
यसर्थ हाम्रो बजेटको सिद्धान्त यसका आधारमा बनिनु पर्छ, यसको अर्थ के हो भने, हामी समाजवादमा जाने भनेको यो दलाल अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने हो। यसर्थ यसको सिद्धान्त मूलतः दलाल अर्थतन्त्रको ठाउँमा हामी समाजवादतर्फ जाने राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने हाम्रो अर्थतन्त्रको बाटो हो भन्ने कुरा यसमा यत्रतत्र लेखिएका छन्। यसअर्थ पनि मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ।
मूल कुरा यसको व्याख्या, खासगरी दलाल अर्थतन्त्रमा हामीले राम्ररी सचेत हुन सकेनौँ भने, अन्ततः हाम्रा जस्ता सत्ताहरु, जुन फासिष्ट सत्तामा परिणत भए, त्यस्तो खतराबाट बच्नु पर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान राखेनौँ भने त्यहि बाटो हिँडेर हामी पुग्ने ठाउँ त्यहि नै हुन्छ।
यसर्थ बजेटको सिद्धान्तको कुरा गर्दा यसलाई ध्यान दिनु पर्छ भन्ने लाग्दछ।
यसको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि जसरी यसको सिद्धान्त हामी सामाजिक, अर्थराजनीतिक स्वरुपलाई ध्यान दिन्छौँ त्यसैगरी बजेटको प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने यहाँ अरुअरु धेरै कुरा आएका छन्। करको कुरा, पूर्वाधारको कुरा आयो, सामाजिक विकासको कुरा आयो, अझै मान्छेकै कुरा आउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको अर्थ के हो भने, माक्र्सवादी आँखाबाट हेर्दाखेरि हाम्रो दलाल अर्थतन्त्रले हाम्रो समाजमा कस्ता वर्गहरु जन्माएको छ भनेर हेर्नु पर्छ।
यसरी हेर्दा म पाँचवटा वर्ग देख्दछु। पहिलो दलाल पूँजीपति वर्ग। यो वर्ग कहिँ विजनेस, उद्योगमा देखिन सक्छ तर, मूलतः यसले खानी, खोला कब्जा गर्छ, भन्सार कब्जा गर्छ, न्याय, कानून कब्जा गर्छ, अदालत कब्जा गर्छ, राजनीतिक पार्टीहरुलाई कब्जा गर्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रको दोहन गर्छ र निरन्तर माथि हुन्छ र सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ र सबैतिर सर्वव्यापी जस्तै हुन्छ। यो एउटा वर्ग हो जो सबभन्दा शक्तिशाली छ।
दोस्रो राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग हो। पूँजीपति यसअर्थमा हो कि यो नाफा खोज्छ, राष्ट्रिय यसर्थमा हो कि यसले रोजगारी दिन्छ। यो अलि दुःखी छ। करको हाकिमलाई बुझाउनु पर्ने छ, पार्टीलाई चन्दा दिनु पर्नेछ, के मिलाउनु पर्नेछ, जेनतेन बाँचेको यो वर्ग यसअर्थ प्रगतिशिल हो कि यसले कर तिर्छ र रोजगारी दिन्छ।
अर्को मध्यम वर्ग हो। जो आफैँपनि काम गर्छ र अरुलाई पनि काम गराउँछ र दुइटै खालको प्रोफिटमा बाँचिराखेको हुन्छ।
त्यसबाहेकको श्रमिक हो। त्यो श्रमिक जो संगठित क्षेत्रमा छ वा काम गर्ने उसको बाँच्नेसम्मको आधार छ र जीनतिन बाँचीराखेको छ। बाँच्ने अस्थित्वको लागि समस्या छैन तर, राम्ररी बाँच्न पाएको छैन। यसले गर्दा उ संघर्षरत छ।
त्यसबाहेकको भनेको जसलाई मैले सिमान्त श्रमजिवि वर्ग हो। यो श्रमजिवि हो तर, त्यो सिमान्त ठाउँमा छ। त्यो संगठित ठाउँमा छैन। त्यसले जागिर पाउँदैन, त्यसको थोरै सम्पत्तिको नाममा दुई चार कान्ला खेतहरु छन्। त्यसमा टाँस्सिएर, त्यो छोड्न पनि सक्दैन र निक्लन पनि सक्दैन।
अनि यस्ता मान्छेहरु अधिकांश त्यी इटा बोकेर खान्छन् वा ढुंगा फोरेर वा भारी बोकेर खान्छन्। यहाँ त्यो पनि पाउन नसकेर टिक्न नसकेपछि त्यी विदेश जान्छन्। चार लाख जान्छन्, तिनिहरुमध्ये सबभन्दा इमान्दार मान्छेहरु हुन। तिनको कोहि माइवाप छैन।
यसर्थ अब प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दा र मान्छेलाई प्राथमिक बनाउने हो भने हाम्रो बजेटले त्यी मान्छेहरु, सिमान्त श्रमजिविलाई सबभन्दा बढि ख्याल गर्नु पर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ।
यसैपनि हेर्दा यो आँखा र पद्दतीबाट हेर्दा त्यसलाई हेर्ने भनेको के हो भन्दा अरु सबैकुरा त्यस्तै हो, त्यसलाई रोजगारी दिने हो। यो भनेको हाम्रो ६५ प्रतिशत भन्छौँ, त्यो प्रतिशत मान्छेले कृषिमा श्रम छ र त्यसले जम्माजम्मी २७ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान गर्छ भन्छौँ। त्यो मान्छेहरुलाई त्यो श्रमबाट, परम्परागत कृषिश्रमबाट निकाल्दिने हो।
त्यो परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा लिएर आउने हो। जहाँनेर त्यो परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याइदैन त्यो पूँजिपति दलाल हुन्छ। राष्ट्रिय हुने भनेर हामीले खुब भनिराखेका छौँ। तर, के हो राष्ट्रिय भनेको भने, यसको चक्र जुन छ, त्यसलाई सूचारु गरिदिने हो। त्यो भनेको हामीले परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याउने यो जुन चक्र र प्रक्रिया छ यसलाई सूचारु राखिदिनु पर्छ। बस हाम्रो बजेटले गर्ने, समाजवादी बजेटले गर्ने काम यहि हो भन्ने मलाई लाग्दछ।
यसर्थ हामी यहाँ केन्द्रीत भएर त्यो चार लाख मान्छेलाई जागिर दिन थाल्यौँ भने त्यसले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्छ। त्यसले त्यो भन्दा अलि माथिको श्रमजिवि वर्ग जुन छ त्यसको हैसियत राम्रो बनाइदिन्छ। अहिलेको मध्यम वर्ग त धेरै राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा परिणत भइसकेका हुनेछन्। र राष्ट्रिय पूँजीपति अझ ठूलो राष्ट्रिय पूँजीपति हुने छन् र हामीले त्यहाँसम्म पूग्दाखेरि दलाल पूँजीलाई नियन्त्रण गरिसकेका हुने छौँ। अन्त्य पनि गरिसकेका हुन्छौँ र राम्रो राष्ट्रिय पूँजीको विकास भएको राम्रो मुलुक निर्माण गर्न सक्ने छौँ।
यो प्रक्रियाबाट हामी जाने हो भन्ने कुरा मिडियालाई, दुनियालाई, नागरिक समाज, राजनीति वृत्तलाई हामीले बताउनु पर्छ होला भन्ने लाग्दछ। यो प्रक्रियाबाट जाउँ, जाने हो, हामी त्यसरी जान तयार छौँ भनि यसरी मान्छेलाई अपिल गरेर मान्छेलाई केन्द्रीत गरेर हाम्रो सबभन्दा तल परेको जनसंख्यालाई केन्द्रीत गरेर हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्छ होला।
जहाँसम्म हिँजो अलि सिद्धान्तको कुरा गर्यौँ यो कुरालाई कसैले क्रिटिकल मोर्डनिज्म भने कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद भने, जे सुकै भन्दाखेरि पनि टेक्ने अन्ततः माक्र्सवादमा हो। माक्र्सवादमा नटेकीकन तपाई बैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले अहिलेको अर्थराजनीतिक विश्लेषण गर्न, समस्या समाधान गर्न सकिदैन भन्ने दाबीकासाथ विदा हुन्छु।
(सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा व्यक्त विचार)
Prevपछिल्लोबिनाशकारी हावाहुरी पिडितलाई प्रदेश न १ बाट आर्थिक सहायोग
अघिल्लोलुम्बिनी, पशुपतिनाथ र जनकपुरलाई जोड्ने सर्किट आवश्यकNext